﻿Komputermen पृष्ठ 916
<< 913 914 915 916 917 918 919 >>
तपाईं प्रिय पाठकहरूलाई अभिवादन। म समाचार बारे, बरु HTC को शेयर आविष्कार गर्ने बारेमा बताउन चाहन्छौं। त्यसैले संयुक्त राज्य अमेरिका मा मेरो प्यारो, HTC सबै खरीदारों HTC स्वामित्व छ जो कम्पनी देखि सुन्दर हेडफोन को HTC एक एक्स urBeats प्राप्त सुझाव, अर्थात् पुरानो iPhone को लागि विनिमय मा अडियो बीट्स। तपाईं स्टोरमा आउन, एक एक्स किन्न, र आफ्नो स्याउ फोन दिन, र फिर्ती मा बीट्स अडियो देखि हेडफोन प्राप्त। धेरै यस्ता लेनदेन धेरै र राम्रो लाग्न सक्छ, तर तपाईं हेडफोन $ 99 खर्च प्राप्त। त्यसैले पनि धेरै मोहक। ठूलो हेडफोन प्राप्त भनेर मात्र केही nuances छन्, आफ्नो आईफोन काम र overwhelmed हुँदैन। शरीर र ग्लास पूर्णाङ्कहरू हुनुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण अवस्था एक HTC एक एक्स किन्न छ, तर कठिन फोन बिना सुन्दर हेडफोन के किन म, यो समस्या छैन लाग्छ। खैर, तपाईं शायद कुनै एक पनि आइओएस6अद्यावधिक पछि, एउटा iPhone4वा हेडफोन लागि आईफोन5दूर दिन चाहनुहुन्छ कि, बारे तार्किक लाग्छ भने, त्यहाँ केही :) सम्भव छ भनेर glitches छन्, तर तिनीहरूले छ वृद्ध कसैले आईफोन HTC देखि भेंट रुचि हुन र राम्रो हेडफोन प्राप्त हुन सक्छ। यो अधिक कि स्मार्टफोनको HTC एक एक्स साँच्चै सुन्दर फर्श एकाइ, यस्तो कार्य आफ्नो सदस्यहरूका एकदम पर्याप्त र इच्छा छ कि मलाई देखिन्छ। अनि पहिले नै एप्पल गरेको मिसिन को थकित भएकाहरूलाई क्षण हत्याउनु र HTC देखि उपकरणहरू प्रयास गर्न सक्षम हुनेछ। खैर, तपाईं साँच्चै ढिलो होस् वा पछि, कम्पनी एप्पल देखि आफ्नो उपकरण प्रेम भने, तपाईं यस कम्पनी को आईप्याड, वा अन्य उपकरण मर्मत गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यसैले यो राम्रो HTC एक एक्स र मानार्थ हेडफोन प्राप्त हुन सक्छ, होसियार।
म ड्राइभर हटाउन कसरी
नमस्कार प्रिय आगंतुकों!
नेटवर्क एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा फोनमा ग्रे वाइफाइ प्रतिमा। गुगल प्ले काम छैन (प्ले बजार)
यो समस्याको बारेमा धेरै सुनेका छ जब, वाइफाइ, आफ्नो एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा स्मार्टफोनबाट जडान प्रतिमा जोड्ने पछि - खैरो। एक नीलो हुनुपर्छ। सबै केहि, तर यो प्रतिमा खैरो छ जब, गुगल प्ले काम छैन। यो प्रविष्ट गर्न सम्भव छैन। यो सर्भर जडान गर्न असम्भव छ भन्दै, तपाईं त्रुटि प्राप्त गुगल खाता को लगिन र पासवर्ड प्रविष्टि गरेपछि। र Google बिना कुन फोन वा एउटै ट्याब्लेट प्ले?
एन्ड्रोइड 4.1 जेली बीन गर्न उन्नयन कसरी HTC-स्मार्टफोन को धेरै प्राप्त हुनेछ?
नमस्कार। म सोच्न कि HTC देखि फोन को सबै मालिक रोचक, तिनीहरूले एन्ड्रोइड 4.
भाइरस देखि फ्ल्यास कार्ड जोगाउन कसरी
नमस्कार प्रिय पाठकहरु। आज म कसरी title="Nestandartnye भाइरस र देखि href=".
ट्याब्लेटको वा फोन (एन्ड्रोइड) वी प्रविधि (तार बिना) Miracast देखि हावा मा तस्बिरहरू प्रदर्शन गर्दछ। उदाहरणका लागि, गोली एसस र टीवी एलजी
अब यो सञ्चालन प्रणाली Andriod मा चलने पाटी र फोन मा वायरलेस प्रदर्शन सेट मा एक धेरै उपयोगी र प्रासंगिक लेखमा तयार गर्न सम्भव छ। प्रौद्योगिकी Miracast संग, हामी टिभि ट्याब्लेटको छवि प्रदर्शन हुनेछ। सबै यस तार बिना, छ, हावा मा काम गर्न छ। अब, एक ठूलो संख्या सुविधाहरू स्मार्ट टिभी छ, र वाइफाइ मार्फत इन्टरनेट जडान गर्ने क्षमता छ, जो आधुनिक टीभी, पनि एक वायरलेस स्क्रीन प्रविधि इंटेल WiDi, वा Miracast रूपमा काम गर्न मौका छ। यी प्रविधिहरू मा, तपाईं="कसरी वायरलेस मनिटर [इंटेल WiDi र Miracast] रूपमा वाइफाइ?
एक मुक्त उपयोगिता डा प्रयोग भाइरस हटाउन चाँडै विरोधी-भाइरस को प्रभावकारिता जाँच र वेब CureIt
<<      913   914   915   916   917   918   919       >>